Arịrịọ | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Ọ bụ ihe nkịtị na otu onye ma ọ bụ abụọ anaghị ekwenye mkpebi na ikpe ha. Kwenyeghi na ikpe ụlọ ikpe a? Mgbe ahụ enwere nhọrọ iji kpọgharịa ikpe a n'ụlọ ikpe mkpegharị. Agbanyeghị, nhọrọ a anaghị emetụta n'okwu obodo nwere ọmụrụ nwa na-erughị EUR 1,750. Instead kwenyere na mkpebi ụlọ ikpe ahụ? Mgbe ahụ ị ka nwere ike itinye aka na usoro ikpe n'ụlọ ikpe. Ka emechara, gị counterparty nwere ike n’ezie na-ekpebi ịrịọ mkpesa.
YOUD DISRAG AH THE EGO NA NKWUKWU NKWUKWU?
Kpọtụrụ onye na- LAW & MORE!
> Okwu maka arịrịọ
> Mkpegharị ya n'ụlọ ikpe nchịkwa
> Mgbe arịrịọ ahụ gasịrị
Edebere ohere nke ịrịọ na Usoro nke 7 nke Usoro Iwu Obodo Obodo Dutch. Ohere a gbadoro ụkwụ n'ụkpụrụ eji edozi okwu ahụ n'ọnọdụ abụọ: na oge mbụ na-ekpekarị ikpe n'ụlọ ikpe na n'ụlọ ikpe mkpegharị. Ekwenyere na ijikwa ikpe ahụ n'ọnọdụ abụọ na-eme ka njigide ikpe ziri ezi yie, yana ntụkwasị obi ụmụ amaala na nhazi nke ikpe ziri ezi. Mkpesa nwere ọrụ abụọ dị mkpa:
• Njikwa ọrụ. Na ịrịọ arịrịọ, rịọ ụlọ ikpe ka nyochaa okwu gị ugboro ugboro. Thereforelọ ikpe a na-enyocha ma na onye ọka ikpe na mbụ gosipụtara eziokwu, na-etinye iwu ahụ n'ụzọ ziri ezi ma na o kpelaala n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na-enweghị isi, ụlọ ikpe ga-akụghasị ikpe nke ọka ikpe nke mbụ.
• Resit ohere. O kwere omume na ịhọrọ ntọala iwu na-ezighi ezi na mbụ, emeghị nkwupụta gị nke ọma ma ọ bụ nye ntakịrị akaebe maka nkwupụta gị. Ya mere ụkpụrụ nke resit zuru oke na ụlọ ikpe mkpegharị. Ọbụghị naanị ka aga - edozigharị ya ụlọ ikpe ọzọ maka ntụle, mana gị dịka ndị na - arịọ arịrịọ ga - enwekwa ohere iji dozie mmejọ gị mehiere na nke mbụ. Enwerekwa ohere nke ịrịọ arịrịọ ka iwelie ihe ị na-ekwu.
Okwu maka arịrịọ
Ọ bụrụ n ’ịhọpụtara maka usoro mkpegharị n’ụlọ ikpe, ị ga-etinye akwụkwọ mkpesa n’ime oge ụfọdụ. Ogologo oge ahụ na-adabere n'ụdị ikpe ahụ. Ọ bụrụ na ikpe metụtara ikpe nke a ụlọ ikpe obodo, ị nwere ọnwa atọ site na ụbọchị ikpe iji tinye akwụkwọ mkpesa. Have mere ihe gbasara iji nchịkọta iji gbabịa? N'okwu ahụ, oge naanị izu anọ na-emetụta maka ịrịọ ụlọ ikpe. Ndi ụlọ ikpe omekome tulee n ’ikpe gị? N'okwu ahụ, ị ​​ga-enwe naanị izu abụọ mgbe mkpebi nke ịrịọ ụlọ ikpe.
Ebe ọ bụ na usoro mkpesa ahụ na-arụ ọrụ doro anya iwu kwadoro, a ga-agbatịrịrị usoro oge a. Ya mere, oge a na-arịọ arịrịọ ka ọ ga - abụ oge agụchaghị. Agaghị etinye akwụkwọ mkpesa n'ime oge a? Yabụ na mbubreyo, ya mere ịgaghị anabata. Ọ bụ naanị mgbe ụfọdụ enwere ike itinye akwụkwọ mkpesa ka ọ gwụsịrị ụbọchị ngwụsị maka ịrịọ arịrịọ. Nke a nwere ike bụrụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ihe kpatara ikpe mkpegharị ahụ bụ ihe kpatara onye ọka ikpe n’onwe ya, n’ihi na o zigoro ndị otu ahụ iwu oge.
N'ihe banyere mkpesa ahụ, ụkpụrụ bụ isi bụ na ihe dị na mbụ izizi metụtara usoro arịrịọ. Ya mere, a na-amalite ime mkpesa a nchịkọta n'otu usoro na otu ihe achọrọ maka nke ọzọ na nke mbu. Agbanyeghị, ọ dịbeghị mkpa ikwu ihe kpatara arịrịọ. Ebumnuche ndị a ka a ga-egosipụta na nkwupụta nke mkpesa nke A na-eso subpoena.
Ihe mere ndị mmadụ ga-eji ekpechitere onye chọrọ ịrịọ arịrịọ ka o kwuchitere ọnụ ya bụ na ọ ga-ewezuga mkpebi ụlọ ikpe ahụ agbagha na mbụ. Akụkụ ndị ahụ nke ikpe a na-akwadoghị ihe ọ bụla akwadoghị, ga-adịgide n'ike na agaghị enwe mkparịta ụka maka ịrịọ arịrịọ. N'ụzọ dị otu a, arụmụka na ịrịọ arịrịọ ma yabụ agha nke iwu nwere oke. Ya mere odi nkpa iji bulite nnabata nke mkpebi ekwuru na mbu. Ọ dị mkpa ịmara n'ọnọdụ a, ihe akpọrọ izugbe ala, nke na-ezube iweta esemokwu ahụ ruo na mkpebi ikpe zuru ezu, agaghị enwe ike ọ gaghị aga n'ihu. N’aka ozo: ihe mgbakwasa agha aghaghi inwe mgbochi di nkpa ka o wee puta ihe diri ndi ozo na ihe omuma ya.
Nkwupụta nke mkpesa na-esochi nkwupụta nke nchekwa. N'aka nke ya, onye a na-azara ọnụ na ịrịọ arịrịọ nwekwara ike wepụta ihe mgbakwasị ụkwụ megide mkpebi ikpe na-agbagha ma zaghachi nkwupụta nke onye na-arịọ arịrịọ banyere mkpesa. Nkwupụta nke mkpesa na nkwupụta nke ịgbachitere na-akwụsịkarị mgbanwe nke ọnọdụ na mkpesa. Mgbe agbanwere akwụkwọ edere ede, ọ bụ na a naghị ekwe ka izipu ntọala ọhụrụ, ọbụnadị iji mee ka azịza ahụ dịkwuo elu. Ekpebiri ya na onye ọka ikpe enweghị ike ị attentiona ntị na ihe mgbakwasị ụkwụ nke etinyegoro mgbe nkwupụta nke mkpegharị ma ọ bụ ịgbachitere. Otu ihe a na-abawanye na nkwupụta ahụ. Agbanyeghị, site na mwepu, a ka nwere ike ịnabata ala n'oge ọzọ ma ọ bụrụ na onye nke ọzọ enyela ikike ya, mkpesa ahụ na-esite n'ụdị esemokwu ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ọhụụ bilitere mgbe edere akwụkwọ ndị ahụ.
Dị ka mmalite, edere ede ede na ihe atụ nke mbụ na-esochi ya ngere n’ihu ụlọ ikpe. Enwere ihe dị na ụkpụrụ a na mkpesa: ịnụrụ ikpe n'ụlọ ikpe bụ nhọrọ ma yabaghị ya. Ya mere, ndị ụlọ ikpe na-ekpekarị ọtụtụ ikpe. Agbanyeghị, ha abụọ nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe maka ịnụ okwu ha. Ọ bụrụ na ndị otu na-achọ ịnụ ntị n'ihu ụlọ ikpe mkpegharị, ụlọ ikpe ga-ahapụ ya, belụsọ na enwere ọnọdụ pụrụ iche. Ruo ugbu a, iwu nke dị n'arịrịọ arịrịọ ka dị.
Nzọụkwụ ikpeazụ na usoro ikpe na mkpesa bụ ikpe. N’ikpe a, ụlọ ikpe mkpegharị ga-egosi ma mkpebi ikpe ụlọ ikpe a ekwesiri izi ezi. Na omume, ọ nwere ike were ọnwa isii ma ọ bụ karịa maka ndị ọzọ ga-eche ikpe ikpeazụ nke ụlọ ikpe mkpegharị. Ọ bụrụ na a kwadoro ala onye na-arịọ arịrịọ, ụlọ ikpe a ga-ewepụzi esemokwu ahụ ma dozie ya n’onwe ya. Ma ọ bụghị ya, ụlọ ikpe mkpegharị ga-akwado mkpebi ikpe ahụ.
Mkpegharị ya n'ụlọ ikpe nchịkwa
Do kwenyeghị na mkpebi nke ụlọ ikpe nhazi? Mgbe ahụ ị nwekwara ike ịrịọ arịrịọ. Agbanyeghị, mgbe ị na-emeso iwu nchịkwa, ọ dị mkpa iburu n'uche na n'ọnọdụ ahụ ị ga-ebu ụzọ nwee ike ịbanye n'okwu ndị ọzọ. Ọ nwere oge izu isii site na mgbe ekwuputara mkpebi onye ọka iwu na-ahụ maka nhazi, nke ị nwere ike itinye akwụkwọ mkpesa. Also ga-emekwa ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịgakwuru maka ụdị mkpesa. Whichlọ ikpe ị ga-aga dabere n’ụdị ikpe a:
• Iwu nchekwa na ndị ọrụ obodo. Ndị omebe iwu na-ahụ maka nchekwa na ndị ọrụ obodo na-ahụ maka ịrịọ na Central Board of Appeal (CRvB).
• Iwu nchịkwa akụ na ụba na ikpe mkpezi. Ndị ọzọ, Iwu Asọmpi, Postal Act, Commodities Act na Telecommunication Act na-eme ya n'okwu ndị ọzọ, ndị ọzọ na-ahụ maka ịrịọ maka azụmaahịa (CBb) na mkpesa.
• Iwu mbata na ọpụpụ na okwu ndị ọzọ. Ndị ọzọ, gụnyere okwu gbasara mbata na ọpụpụ ọka ikpe, ndị na-ahụ maka njikwa ikike nke Kọmitii Steeti (ABRvS) na-ahụ maka arịrịọ.
Mgbe arịrịọ ahụ gasịrị
Ọtụtụ mgbe, ndị otu a na-agbaso ikpe nke ụlọ ikpe mkpegharị ma kpezie ikpe ha na mkpegharị. Ka o sina dị, ị na-ekwenyeghị n'okwu ikpe ụlọ ikpe mkpegharị? Mgbe ahụ enwere nhọrọ ị ga-eziga akwụkwọ ikpe na Supremelọikpe Kasị Elu nke Dutch ruo ọnwa atọ mgbe ikpe nke ụlọ ikpe mkpegharị gasịrị. Nhọrọ a emetụtaghị mkpebi nke ABRvS, CRvB na CBb. E kwuwerị, nkwupụta nke ahụ ndị a nwere ikpe ikpeazụ. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịgbagha mkpebi ndị a.
Y’oburu na iwere cassation n’enwe nsogbu, ekwesiri iburu n’uche na odighi uzo maka nyocha esemokwu. Ihe mgbakwasị maka cassation dịkwa ụkọ. E kwuwerị, enwere ike ịmalite cassation ma ọ bụ na ụlọ ikpe ndị ọzọ etinyeghị iwu ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ usoro nwere ike iwe ọtụtụ afọ ma soro oke ụgwọ. Ya mere, ọ dị mkpa iji wepụta ihe niile na usoro mkpesa. Law & More dị obi ụtọ inyere gị aka na nke a. A sị ka e kwuwe, ịrịọ arịrịọ bụ usoro dị mgbagwoju anya na ikike ọ bụla, na-emetụtakarị ihe ndị dị mkpa. Law & More ndị ọka iwu bụ ndị ọkachamara na ma ndị omempụ, nhazi na iwu obodo ma nwee obi ụtọ inyere gị aka n'okwu ikpe. You nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ? Biko kpọtụrụ Law & More.